Adobe XD: Volavola, Prototype ary zarao amin'ny Adobe's UX / UI Solution | Martech Zone
Adobe XD: Volavola, Prototype ary zarao amin'ny vahaolana an'ny UX / UI an'ny Adobe
Alarobia, Jolay 18, 2018 Talata, Jolay 17, 2018 Douglas Karr
Androany, nametraka Adobe XD aho, ny vahaolana UX / UI an'ny Adobe ho an'ny tranokala prototyping, rindranasa tranonkala ary rindranasa finday. Adobe XD dia ahafahan'ny mpampiasa miova avy amin'ny wireframes static mankany amin'ireo prototypes interactive amin'ny tsindry tokana. Azonao atao ny manova ny famolavolana anao ary mahita ny fanavaozana ny prototype dia mandeha ho azy - tsy ilaina ny fanindronana. Ary azonao atao ny mijery mialoha ireo prototypes anao, feno miaraka amin'ny tetezamita amin'ny fitaovana iOS sy Android, avy eo zarao amin'ny ekipanao raha mila hevitra haingana.
Endri-javatra amin'ny Adobe XD Anisan'izany:
Prototypes iraisana - Mifamadiha avy amin'ny famolavolana mankany amin'ny maodely prototype amin'ny tsindry tokana, ary ampifandraiso ireo artboard hampitana ny fivezivezena sy ny lalan'ny fampiharana multiscreen. Ampifandraiso ireo singa famolavolana amin'ny artboard iray hafa, anisan'izany ireo sela Repeat Grid. Manampia fifampiresahana miaraka amin'ny fanaraha-maso maso intuitive hizaha toetra sy hanamarinana ilay zavatra niainana.
Mamoaha prototypes hahazoana valiny - Miteraha rohy an-tranonkala azo zaraina mba hahazoana hevitra momba ny volanao, na ampidiro ao amin'ny Behance na pejy web izy ireo. Ny mpandinika dia afaka maneho hevitra mivantana momba ny prototypes sy ny faritra manokana amin'ny volavolanao. Hampandrenesina ianao rehefa manome hevitra izy ireo, ary afaka mamelombelona ny mpitsikilo azy ireo fotsiny izy ireo hahita ny fanovana nataonao.
Kitapom-batsy haingam-pandeha sy marobe - Na miasa amin'ny artboard iray ianao na zato, XD dia manome anao fampisehoana haingana toy izany koa. Volavola ho an'ny efijery sy fitaovana samihafa. Aforeto ary zahao tsy misy fotoana iasana. Misafidiana habe efa voafaritra na mamaritra ny anao manokana, ary manaova kopia eo anelanelan'ny sary kanto nefa aza atao very ny fametrahana ireo singa famoronana anao.
Mamerina Grid - Safidio ny entana ao anaty ny volanao, toy ny lisitry ny fifandraisana na ny galerin-tsary, ary avereno averina mitsivalana na mitsivalana im-betsaka araka izay itiavanao azy izy ireo - mijanona ho simba avokoa ny fombanao sy ny elanelanao. Manavao singa iray indray mandeha ary havaozina hatraiza hatraiza ny fanovana nataonao.
Fanohanana eo amin'ny sehatra - Ny Adobe XD dia manohana ny Windows 10 (Universal Windows Platform) sy Mac, miaraka amin'ireo fampiharana finday miaraka amin'ny Android sy iOS.
Tontonana Assets - Ataovy mora azo ampiasaina indray ny loko sy ny toetran'ny olona amin'ny alàlan'ny fanampiana azy ireo ao amin'ny tontonana Assets (teo aloha ny tontonana Symbols), izay misy marika ho azy. Amboary ny loko na ny toetra amam-panahy ao amin'ilay tontonana ary ho hita taratra mandritra ny rakitrao ireo fanovana.
Marika namboarina - Mitsitsia fotoana miaraka amina marika, singa famoronana azo ampiasaina indray izay manafoana ny filana mitady sy manitsy ny ohatra tsirairay amin'ny fananana amin'ny rakitra iray. Hanavao ny iray ary hanavao ny toerana rehetra, na hisafidy ny hihoatra ny tranga manokana. Ny sary dia mety sary vongin-tsary, sary raster, na zavatra an-tsoratra, ary azo ampiasaina ho zavatra ao anatin'ny Repeat Grids.
Tranon-trano Creative Cloud - Miaraka amin'ny fampidirana Creative Cloud Library, azonao atao ny miditra sy mampiditra sary, loko ary endrika amam-bika noforonina tao amin'ny Photoshop CC, Illustrator CC, ary ireo rindranasa Creative Cloud hafa avy ao anaty XD, ary ampiasao indray izy ireo na aiza na aiza ao amin'ny antontan-taratasinao.
Inspektur fananana ara-nofo - Miasa amin'ny toerana tsy misy rivo misaotra noho ny mpanara-maso ny fananana mpanara-maso ny zava-misy, izay mampiseho ny safidy ho an'ireo zavatra nofidinao ihany. Ovay ny fananana toy ny loko sy ny hatevin'ny sisintany, fenoy loko, aloka, manjavozavo, opacity ary fihodinana ary safidy fidirana amin'ny fampifanarahana, refy ary Repeat Grid.
Fikarohana canvas maranitra - Mizaha mora foana amin'ny faritra manokana amin'ny volavolanao, na manaova fisafidianana amin'ny solaitrabe ary ampiasao hitsin-dàlana mba hankanesana eo. Sasao na zahao amin'ny lalan-totozy, touchpad, na ny hitsin-dàlan'ny keyboard. Ary mahazoa fampisehoana tsara na dia manana artboard an-jatony aza ianao.
Sosona Contextual - Mijanona milamina sy mifantoha rehefa mitantana famolavolana sarotra noho ny fomba fanatontosana ny sosona. XD ihany no manasongadina ireo sosona mifandraika amin'ilay solaitrabe iasanao, amin'izay dia ho hitanao haingana sy mora izay ilainao.
Fitaovana fitarihana layout - Misintona, miverina mampiasa ary mamerina mamolavola singa famolavolana amin'ny alàlan'ny grid haingana sy fitaovana fampitaovana intuitive hafa izay manampy anao hamorona fandrefesana eo anelanelan'ny zavatra, saron-tava misy endrika, vondrona, hidin-trano, ampifanaraho ary hizarana ireo singa famolavolana, sy maro hafa.
Vokatry ny blur - Fafao haingana ny zavatra manokana na ny mombamomba anao iray manontolo hanovana ny teboka ifantohan'ny volavolao, manome azy ny halaliny sy ny refiny.
Gradien-tsipika marobe - Mamorona gradien-tsipika tsara tarehy amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso maso tsotra nefa mazava ao amin'ny Color Picker. Azonao atao ihany koa ny manafatra gradients avy amin'ny Photoshop CC sy Illustrator CC.
Fitaovana penina maoderina - Manaova sary mora foana miaraka amin'ny fitaovana Pen. Mampiasà làlan-kaleha, ampio na esory ny vatofantsika, alefaso mora foana ny tsipika ary miova eo anelanelan'ny lalana miolaka sy ny zoro - samy manana fitaovana mitovy daholo ireo.
Fanovana vondrona Boolean - Mamorona sy manandrama amin'ny endrika sarotra amin'ny alàlan'ny fanakambanana vondrona zavatra mampiasa mpandraharaha Boolean tsy manimba.
Fitaovana fanoratana - Lahatsoratra an-tsoratra miaraka amin'ny fanaraha-maso tsara hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Amboary mora foana ireo singa typografika toa ny font, typeface, habe, fampifanarahana, spacing character, ary spacing spaces. Ovay ny fisehoan'ny lahatsoratrao amin'ny fomba fanovanao singa hafa ao amin'ny XD toy ny opacity, fenoy, background ary blur effects, ary ny sisintany.
Fanaraha-maso loko milamina - Misafidiana loko amin'ny alàlan'ny fampidirana sanda marina na amin'ny alàlan'ny santionany avy ao anatiny na ivelan'ny XD miaraka amin'ny Eyedropper. Mamorona sy mitahiry takelaka misy loko, ary ampiasao hitsin-dàlana ho an'ny kaody hexadecimal ao amin'ny Color Picker.
Loharano UI - Mamolavola haingana sy prototype ho an'ny Apple iOS, Google Material Design, ary fitaovana Microsoft Windows izay mampiasa singa mpampiasa interface tsara.
Adikao ary apetaho amin'ny fampiharana endrika hafa - Mitondrà zava-kanto ao amin'ny XD avy amin'ny Photoshop CC sy Illustrator CC.
IOS sy Android topy maso mialoha - Topazo maso ireo volavola sy ny fifandraisanao rehetra amin'ireo fitaovana tena kendrenao. Manaova fanovana eo amin'ny birao ary andramo avy eo amin'ny fitaovanao ny fahamendrehana sy ny fampiasa.
Hotspot hinting - Asongadino ho azy ireo teboka mafana ao amin'ny prototype anao mba hahitan'ny mpampiasa izay faritra mifanerasera sy azo tsindriana.
Fitantanana prototype - Mamorona URL marobe avy amin'ilay rakitra mitovy hizarana kinova samihafa amin'ny prototype anao. Mizarà prototypes tsy voafetra, ary miditra mora foana ary mamafa azy ireo avy amin'ny kaonty Creative Cloud.
Raketo an-tsary ny fifandraisan'ny prototype ho toy ny horonan-tsary - Rehefa manindry ny topi-maso ianao dia manorata fisie MP4 mba zarainao amin'ny ekipanao na ny mpiara-miasa aminao (Mac ihany).
Manondrana ny kanto, ny fananana ary ny arisitra - Manondrana sary sy volavola amin'ny endrika PNG sy SVG, azonao ampiendrehana ho an'ny iOS, Android, tranonkala, na ny fanao mahazatra anao. Manondraha artboard iray manontolo na singa iray. Ary zarao ny fananana sy ny kanto amin'ny alàlan'ny fanondranana azy ireo ho rakitra PDF tsirairay na rakitra PDF tokana.
Fanohanana amin'ny fiteny maro - Ny fiteny tohana dia misy ny anglisy, frantsay, alemà, japoney ary koreana.
Fampandrenesana mailaka ho an'ny hevitra - Makà fampandrenesana mailaka rehefa maneho hevitra momba ireo prototypes tranokalanao ireo mpandray anjara. Ny mailaka dia azo alefa isam-batan'olona na andramana amin'ny fandevonan-kanina isan'andro
Ny tsara indrindra dia i Adobe XD miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hampiasa ny Adobe Creative Suite!
Fampahafantarana: Mpikambana ao amin'ny Adobe izahay.
Tags: Adobesuite famoronana adobeAdobe XDprototypingui famolavolanauser experienceMpampiasa interface
Epson LightScene: Fanandramana mpivarotra ifanakalozana miaraka amin'ny vinavina nomerika